व्यक्तिगत विरामीहरु को नैदानिक पोषण मा मतभेद
रोगी को स्वास्थ्य को 50% आफ्नो जीवन शैली मा निर्भर गर्दछ। त्यसैले डाक्टर आफूलाई भन्न र यो साँचो हो। रोग को नतिजा दबाइहरु, आफ्नो dosages र चिकित्सा प्रक्रियाहरु को सही मार्ग मा मात्र होइन निर्भर भन्ने तथ्यलाई। तिनीहरूलाई साथ सर्व मोड र विशेष चिकित्सा हो पोषण। यो मानव शरीर को कुनै पनि रोग लागि त्यहाँ एक कमी र केही metabolites को overabundance छ, यो चयापचय विचलित बिस्तारै समाप्त भन्ने तथ्यलाई कारण। र यो आय मात्र आवश्यक पोषक लागि क्षतिपूर्ति गर्न सम्भव छ भने, सबै कार्यहरु को रिकभरी अनियन्त्रित भन्दा धेरै छिटो, यो, चिकित्सा छैन पोषण हुनेछ।
कुपोषण कारण खतरनाक अवस्था
त्यसैले, मधुमेह खाना मा slightest अतिरिक्त चीनी हाइपोग्लाइसीमिया पनि बिरामीको चेतना को दमन गर्न जान्छ गर्दा, ketoatsidoticheskaya coma को विकास हुन सक्छ। तसर्थ, यी विरामीहरु मा, digestible कार्बोहाइड्रेट, उच्च ग्लूकोज र बोसो को कम रकम संग नैदानिक पोषण उत्पादनहरु। तिनीहरूले यी विरामीहरु लागि विशेष डिजाइन तालिका №9, काम तोकिएको छ।
gastritis, pancreatitis, cholecystitis, समारोह र कलेजो को आकृति विभिन्न उल्लंघन: नैदानिक पोषण विरामीहरु को पनि अधिक तीव्र मान जठरांत्रिय पर्चा को घाउ मा लिन्छ। तिनीहरूलाई लागि, खाना मात्र होइन एक छ ऊर्जा स्रोत, तर पनि आफ्नो रोग एक Provocateur exacerbation। त्यसैले तिनीहरू विशेष 1,2र5टेबल, बोसो, अमिलो, पिरो र गरिबी digestible खाद्य पदार्थ, कार्रोप्नेटेड पेय पदार्थ को एक चिह्नित कमी उद्देश्य तोकिएको छन्। यी विरामीहरु मा चिकित्सीय पोषण मा, पनि त्यहाँ भोक को अवधि पूरा, आफ्नो शरीर र तिनीहरूलाई मा म्युट रोग प्रक्रियाहरू को पहिले नै काल राज्य राहत गर्न छ। यो रोग सबै ऊर्जा लागत लागि क्षतिपूर्ति र पाचन सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण पनि छ। यो अन्त गर्न, बख्शते सिफारिस पकाउने विधिहरू: broths र सूप श्लेम लाग्एको, को आंतों पर्खाल enveloping मनपरेको छन्, उमालेको stewing जीवाणुहरू र आफ्नो toxins तिनीहरूलाई रक्षा गर्न सम्पत्ति छ।
हृदय र अन्तस्करणले को रोगहरु मा पोषण
को मा धेरै ध्यान स्वास्थ्य खाना को हृदय प्रणाली को रोगहरु संग दिइएको र बिरामीको छ। तिनीहरूलाई लागि छुट्टै 10-औं तालिका छ। यो आहार मा खातामा रक्त नली र सेल झिल्ली को पर्खालहरु, साथै बोसो र शर्करा को तेज प्रतिबन्ध स्थिर, ऊर्जा र प्रोटिन उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यकता लिन्छ। हृदय लागि ऊर्जा बेबदल स्रोतहरू छन् - यी विरामीहरु को ईओण संरचना किनभने, सबैको थाह रूपमा, पोटासियम र म्याग्नेसियम, महत्वपूर्ण पनि छ।
तर मूत्र प्रणालीको विभिन्न रोगहरु संग विरामीहरु लागि मात्र होइन महत्त्वपूर्ण छ खाना प्रविधि र विभिन्न उत्पादनहरु को सामग्री, तर तरल र लवण को सामग्री। यो यी विरामीहरु edema, urination विकार को आवृत्ति कारण हो, त्यसैले तिनीहरू तालिका №7 डिजाइन। यो दुग्ध उत्पादन, को संख्या बढ्यो शाकाहारी सूप, माछा, फल र तरकारी।
मधुमेह र यसका मुख्य विशेषताहरु लागि शक्ति
दलिया। क्यालोरी र लाभ
म्याग्नेसियम के पाइन्छ? म्याग्नेसियम समावेश उत्पादन
तिल बीउ - तिल खुला!
"देशमा सम्पत्ति सम्बन्ध" - के एक पेशा र त्यहाँ विशेषज्ञहरु लागि मांग छ
जीवित जीव: वासस्थानमा। पर्यावरण कारक, आफ्नो सामान्य विशेषताहरु
मोटे महिला लागि crochet हुक: नाजुक र jacquard ढाँचा कसरी गर्न?
जो मांसपेशी समूह एक पक्ष गर्न उपयोगी tilts छन् र कसरी सही ढंगले व्यायाम गर्न?
सीसी गोप्य विकास: गोठाला Daufmana
उच्च शिक्षामा दूरी सिक्ने
लुगा धुने मेसिन एलजी E10B9LD: विनिर्देशों, समीक्षा
Agglomerate - यो ... क्वार्ट्ज agglomerate बनेको countertops: समीक्षा, दृश्य र समीक्षा